Caddeyn muujineysa in Ugaas Xasan uu Beeshiisa ka yahay sida Farmaajo oo kale - Caasimada Online
Home Warar Caddeyn muujineysa in Ugaas Xasan uu Beeshiisa ka yahay sida Farmaajo oo kale
Caddeyn muujineysa in Ugaas Xasan uu Beeshiisa ka yahay sida Farmaajo oo kale
Muqdisho (Caasimada Online) – Beesha Xawaaadle oo kamid ah beelaha ugu tunka weyn Soomaaliya ayaa ah beesha la aaminsan yahay inay tahay midda ugu adeecitaanka badan Ugaasyada soo maray.
Min Carruur, Haweyne, Dhallinyaro, Odayaal, Siyaasiyiin Ilaa Xildhibaanada beesha Xawaadle waxay ka wada siman yihiin inay ka dambeeyaan sidoo kalana ay qaataan amarka Ugaaska xilligaas xilka u hayo.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble waa ugaaska ay dhawaan sida weyn u duubeyn beesha Xawaadle xaflad weyn oo ka dhacday Magaalada Beledweyne ee xarunta Hiiraan.
Haddaba Ugaaska ayaa dhawaan soo gaaray Magaalada Muqdisho wuxuuna dagay mid kamid ah Hoteelada ku yaal caasimadda, waxaana halkaas ka cadaatay in Ugaas Xasan uu yahay Farmaajaha Beesha Xawaadle maadaama ay Hotelka buuxiyeen qeybaha kala duwan ee beeshiisa.
Dadka soo booqanayo Ugaas ayaa muujinayo jaceylka ay u qabaan iyo sida ay uga dambeeyaan waxaana mararka qaar arkeysaa inta badan shaqisyaadka u imaanayo Ugaaska oo jilbaha dhulka dhiganayo si ay u muujiyaan ixtiraamka ay u hayaan Ugaaskooda taasoo ah arrin mudan in lagu daydo.
Dadka yaqaan shaqsiyadda Ugaas Xasan waxay kuu sheegayaan inuu yahay shaqsi jecel beeshiisa sidoo kalana aan la gamban hadalada isagoo weliba lagu yaqaan inuu yahay shaqsi ad adag oo aan si fudud uga laaban go’aanka uu gaaro.
Haddaba Beesha Xawaadle kaliya sidaan kuma ahan Ugaas Xasan oo waxay sidaan u ixtiraami jireyn dhammaan ugaasyadii soo maray Beeshaas.
Halkaan hoose waxaad ka aqrisan kartaa qaar kamid ah ugaasyadii soo maray Beesha Xawaadle:
Ugaas Ciise Weehaan
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif